Kungani Kudingeka Ukudonswa Kwenja Yasemanzini Inja - I-Ellicott Dredges Blog
Kungani Kudingeka Ukudotshwa Kwezinja Zasolwandle Kuyadingeka
Ama-Anglers adabula i-Sea Dog Creek eduzane neDolobha laseHempstead, eNew York, manje sebekwazi ukuhamba ngokuphepha umfula ngokukhululeka ezindaweni ezingajulile kuleli hlobo; noma kunjalo, lokhu bekulokhu kungenjalo ngaso sonke isikhathi. Ngo-2012, amanzi ezikhukhula avimbekile adalwe yiSuperstorm Sandy enza ukuthi cishe kube nzima ngemikhumbi emikhulu yezentengiselwano ukuhamba emanzini amashadi phakathi komphetho osempumalanga weSea Dog Creek naseLong Creek eseduzane.
Muva nje abasebenzi bendawo abavela ku- Umnyango Wezokulondolozwa Kwemvelo kanye Namanzi Amanzi wasebenzisa i I-Ellicott 460SL "Swinging Dragon®" dredge, eyaziwa ngokuthi yi "Hempstead Bays" ukususa ama-cubic yds³ ayi-8,000 (6,116 m³) esihlabathi eSea Dog Creek eseduze. I-swinging ladder dredge yathengwa yiTown of Hempstead kumenzi we-dredge u-Ellicott Dredges e-2008. AbakwaCrews basebenzise i-dredge ukususa isihlabathi namanzi ukumba kwehle cishe ku-12 ft (3.6 m).
Enye yezinselelo eziningi izisebenzi ezabhekana nazo ngesikhathi sokutshelwa kokukhula zafaka nokusebenza ngaphakathi kwamawindi amafushane kakhulu okucasha. Ngaphezu kwalokho, babengavunyelwe ukusebenzisa isihlabathi esihlanzekile ngaphakathi kwemingcele yezindawo zezihloko ezilawulwayo. Naphezu kokulinganiselwa okuthile, abalandeli bakwazile ukunqoba lezi zingqinamba ukuze baqedele iphrojekthi phakathi namasonto amabili
Umphumela weSiphepho uSandy
Akungabazeki ukuthi iSiphepho uSandy saba nethonya elikhulu esifundeni sendawo. Eqinisweni, lapho amanzi ezikhukhula adlula endaweni yendawo, adala indawo elingasogwini olusempumalanga ye-Sea Dog Creek okwenza ukuba kungabikhona okwenza kube nzima kwabagibeli besikebhe ukuhamba emfuleni.
Isazi se-Conservation Biology uDkt James Browne saphawula ukuthi iSiphepho uSandy saba nethonya elikhulu ekwakhiweni kwesihlabathi esidala ukuthi kuvalwe umgwaqo wamanzi.
“Kalula nje, kwakunyakaziswa isihlabathi ngasogwini lolwandle, futhi kunciphisa nomugqa wamanzi. Izinto zokwakha zabe sezidonswa echwebeni ngesikhathi sesiphepho. Isihlabathi sabe sesifakwa kwezinye izindawo okwehlisa ukuhamba kwamanzi. Lapho izimo zibuyela kwesijwayelekile, kwakungekho okuncane kakhulu ukungabi namanzi kwezinye iziteshi. Ngokwesiko ezinye zalezi zindawo zisukela ku-4 kuye ku-6 ft. Amazinga amanzi ancishisiwe abese edalulwa abangela ukuthi sandbar yakhele emanzini asezingeni eliphansi kakhulu. Lokhu kwakwenza kube nzima ukuhambisa umkhumbi ngaphandle kwamanzi ngaphansi kwenkaba yawo, ”kuphawula uDkt James Browne.
Umphumela Wezemvelo Kwilwandle Inja Yezilwandle
I-Sea Dog Creek ukuphela kwendlela yemigwaqo engenela ngaphakathi kwemikhumbi yokuya enyakatho kwebhuloho elihleliwe eliseduzane nePoint Checkout eseduze. Ukuthuthuka kwakamuva manje kwenza kube lula ukuthi izikebhe zokuhweba zihambe ngokukhululeka. Kodwa-ke, inkinga ecindezela kakhulu ifaka ukusetshenziswa okungcono kwezinto zokuhlanza ezibandakanya ukwenziwa kwamaphrojekthi kasawoti kasawoti.
Amalungu omkhandlu waseHempstead awakwazanga ukuthola ukubuyiselwa kwemashi ngemvume ephuthumayo enikezwe yi-NYSDEC. Izimali ezengeziwe zifunelwa umsebenzi wokubuyiselwa kwemashi ngokushesha okuvela emabhishi nasolwandle i-Sea Dog State. Ithemba ukuthi umsebenzi owengeziwe uzokwehlisa izikhukhula ngesikhathi sesiphepho esizayo.
Cishe zonke iziteshi esifundeni esisazungezile zihlala zivaliwe. Ngakho-ke, ukudonswa okungeziwe kuyadingeka ukugcina imigwaqo yamanzi icacile. Ngokujabulisayo, Idolobha laseHempstead linemishini edingekayo yokudonsa endlini ukubhekana nezinhlekelele zemvelo. Lokhu kugcina izindleko zokubuyisa ziphansi ngokufanele uma kwenzeka isehlakalo esingesihle ngokuzayo esithinta imigwaqo yamanzi eseduze.
Iphrojekthi ye-NYSDEC Yezimali Ukubuyiselwa Kwezinja Zasolwandle
Iqembu lezikhulu ezimele iDolobha laseHampstead eliholwa nguMkhandlu uTimothy D 'Esposito licele i-NYSDEC ukuthi isheshise okudingekayo imvume yokudonsela phansi inqubo ngemuva kokuthunyelwa kwemikhumbi eminingana ngenxa yezimo zamanzi ezingashonile.
Iziphathimandla zedolobha bezidinga ukuhoxiswa kombuso yi-NYSDEC ukuze ziqale ukungena emigwaqeni yangaphakathi kwamazwe. Kungenxa yokuthi lesi yisikhathi sonyaka lapho inkathi yokuzala iqala khona ngenhlanzi ethambile.
Ngenxa yosizo lwe-NYSDEC i-Town of Hempstead Department of Conservation and Waterways yanikezwa imvume yokuphinda inikezwe iminyaka engu-10.
Umsebenzi wonke uqediwe ngaphansi kwemvume ephuthumayo evunyelwe ekhishwe nguMnyango Wezokugcinwa Kwezemvelo eNew York State (NYSDEC.) UKhomishani uD'Esposito uthe, "Inselelo yethu enkulu ukuthola izimvume ezazidingeka ukuqala umsebenzi wokuvuselela iphrojekthi ye-Sea Dog Creek . ”
Iziphathimandla zedolobha laseHempstead manje zihlela ukuqala amaphrojekthi wokudiliza ongeziwe aqale ukuwa kwe-2018.